U-Apple uqala ukuphanda isizathu sokuba kutheni iibhetri ze-iPhone 8 zidumbile | Iindaba zeGajethi
I-Apple iqala ukuphanda isizathu sokuba kutheni iibhetri ze-iPhone 8 zidumbile
Kunyaka ophelileyo kwabhalwa okuninzi malunga neengxaki ngeebhetri zeGalaxy Note 7, isiphelo sendlela esathi ngenxa yenani elikhulu leengxaki esasibonisile sarhoxiswa kwimarike, zombini iiyunithi ezazisele zithengisiwe, kunye iiyunithi kude kube ngumzuzu zilungele ukuhanjiswa.
Njengoko i-Samsung iqinisekisile kwiinyanga ezimbalwa kamva, ingxaki ibangelwe ngumgangatho ombi weebhetri kunye nokusilela kolawulo olusemgangathweni olunokuthi lubone le ngxaki. Kulo nyaka Kubonakala ngathi udluliso luthathwe yi-Apple 8 ye-Apple, kodwa okwangoku kubonakala ngathi ukuya kwinqanaba elincinci.
- ???? (@ Magokoro0511) Septemba 24, 2017
I-Apple ayisiyo nkampani esetyenziselwa ukuqaphela xa isenza izinto gwenxa, enyanisweni, kubiza imali eninzi ukuyamkela kwaye xa isenza, kungenxa yokuba ayinandlela yakukuyiphepha. Kodwa ngeli xesha, kubonakala ngathi abafana baseCupertino bazibekile iibhetri, ubuncinci kwingxaki yokugqibela ethi ezinye iiyunithi ze-iPhone 8 zibonise.Iiyunithi ezithile ze-iPhone 8 zibona indlela Ngexesha lenkqubo yokutshaja, ibhetri yokudumba okufanayo, ukuyonakalisa ngokupheleleyo, njengoko sinokubona kumfanekiso ophambili kweli nqaku.
Ityala lokuqala lafunyanwa eTaiwan, kodwa kwiintsuku nje ezidlulileyo Inani lamatyala belisanda kwihlabathi liphela, ukusuka eJapan, ukuya eTshayina, ukuya eGrisi naseKhanada. Inani labachaphazelekayo lincinci kakhulu xa kuthelekiswa nenani leeyunithi ezithengiswa yiApple minyaka le, kodwa kuyacaca ukuba ayifuni ukuvelisa ingxaki efanayo neyojamelene nayo iSamsung kunyaka ophelileyo. Inkampani ibanga ukuba iyasebenza ukufumana ukuba ingxaki ibiyintoni kwaye kutheni ibalekile kulawulo lomgangatho.
Kuyamangalisa ngokukodwa oko amatyala asasazwa kwihlabathi liphela, enokuba yingxaki enkulu, njengoko kungenakubakho kuphela inani leebhetri eziphosakeleyo, kodwa ziya kubakho ngaphezulu, zibangele ukuba inani lamatyala anje lenyuke ngaphezulu kweentsuku okanye iiveki kwihlabathi liphela kwaye kunzima ngakumbi kwiApple ukurhoxisa kwiimarike zonke izixhobo ezinokuchaphazeleka yile ngxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Apple iqala ukuphanda isizathu sokuba kutheni iibhetri ze-iPhone 8 zidumbile
Ngento endiye ndayibiza ngayo. Ndiyathemba ukuba ayizukwenzeka loo nto.
Ekugqibeleni bayityhila inqwelwana erhuqayo ye Star Wars: iJedi yokugqibela